သူမကို စိတ်ပါလာအောင် ဘယ်လိုပြုစုမလဲ – Gentleman Magazine
သူမကို စိတျထလာအောငျ ဘယျလိုပွုစုမလဲ
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာလဲ အိပ်ရာထဲမှာ အရမ်းစိတ်ကြွတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမအရမ်း ကောင်းကောင်းခံစားနေရမှပါ။ သင်သာ သူမကို အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကြွအောင် လုပ်ပေးခဲ့နိုင်ရင်တော့ သင်တို့ ပြန်ရမဲ့ Sex ကိစ္စဟာ အံ့ဩလောက်အောင် Hot နေမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပုရိသတွေကတော့ စိတ်ထလွယ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကွဲပြားခြားနားပြီး ပိုခက်ခဲတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမျိုး လိုပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းစနစ်တွေနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ.
၁. ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါ
၅. စိတ်ကြွစရာ ပြောပြပါ
သင့်ချစ်သူလေးက စိတ်ကြွစရာတွေ ကြားရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ နှုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အိပ်ခန်းထဲမှာ အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ ဆဲဆိုတော့ မနေပါနဲ့။ သင် သူမကို နည်းနည်း ညစ်တီးညစ်ပါတ်ဆန်တာတွေ မေးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ– ဘယ်လိုခံစားရလဲ၊ လိုချင်သေးလား ဆိုတာတွေပါ။ သင် သူမကို ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလဲ နားနားကပ်ပြီး သေချာ သရုပ်ပေါ်အောင် ပြောပြပါ။ ဒါပေမယ့် သင်တို့နှစ်ယောက်လုံး လိင်ကိစ္စမှာ အကျွမ်းဝင်ပြီး သူမလဲ လိုချင်မှ အဲလိုတွေပြောပါ။ ရှက်ကြောက်နေတဲ့သူကို သွားပြောရင်တော့ သူမ ငိုသွားပါလိမ့်မယ်။
၆. မှန်းဆရ ခက်နေပါစေ
မိနျးမတဈယောကျဟာလဲ အိပျရာထဲမှာ အရမျးစိတျကွှတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမအရမျး ကောငျးကောငျးခံစားနရေမှပါ။ သငျသာ သူမကို အတတျနိုငျဆုံး စိတျကွှအောငျ လုပျပေးခဲ့နိုငျရငျတော့ သငျတို့ ပွနျရမဲ့ Sex ကိစ်စဟာ အံ့ဩလောကျအောငျ Hot နမှောပါ။ ကြှနျတျောတို့ ပုရိသတှကေတော့ စိတျထလှယျပမေယျ့ အမြိုးသမီးတှကေတော့ ကှဲပွားခွားနားပွီး ပိုခကျခဲတဲ့လှုံ့ဆျောမှုမြိုး လိုပါတယျ။ အောကျဖျောပွပါ နညျးစနဈတှနေဲ့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
၁. ဖွညျးဖွညျး လုပျပါ
၅. စိတျကွှစရာ ပွောပွပါ
၆. မှနျးဆရ ခကျနပေါစေ
သူမ မှနျးရခကျအောငျ လုပျပွီး သူမကို Surprise လုပျပါ။ သငျ လုပျမယျ လှုပျရှားမှုတိုငျးကို သူမ ခနျ့မှနျးနရေပါစေ။ ခု လှုပျရှားမှုမှာ နူးညံ့ရငျ နောကျတဈခုကို မှနျးဆမရအောငျ လုပျပါ။ သူမကို ကုတငျပျေါပဈလှဲပါ။ သူမအပျေါအင်ျကြီ ခြှတျလိုကျပါ။ သူမ လညျတိုငျနဲ့ ရငျသားလေးကို နမျးပါ။ သငျဘာလုပျမယျဆိုတာ မှနျးနရေတာ သူမကွိုကျပါတယျ။
Previous: ဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့ သိပံ္ပနည်းကျ မဟာဗျူဟာများ
Next: ထိပ်တန်းအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ အရည်အသွေး(၄)ခု